Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny isavorovoroan-kilantoana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Ny isavorovoroan-kilantoana
Vao nanomboka ity taona vaovao ity dia raharaha mafampana hatrany no heno sy hita teto amin’ny firenena. Nanomboka izany ilay resaka volamena tratra tany Afrika Atsimo, izay tsy azo idirana lalina loatra satria mbola eo am-panadihadiana ny momba izay ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, na ny eto an-toerana na ny any ivelany.
Fa nandritra iny herinandro lasa iny koa no nisehoan’ilay raharaha “Ecole normale supérieure” (ENS), nanomboka teto Antananarivo ary niitatra tany amin’ny faritany hafa. Resaka fitakiana ny handraisana ireo mpianatry ny ENS ho mpiasam-panjakana moa no anton’ny fitakiana, ary naharitraritra kely ihany ny fitokonana. Rehefa nifanatona nefa ny mpianatra nitaky sy ny minisitera iantefan’ny fitakiana, dia niravona ny olana.
Mbola tsy misasaka ny volana janoary, taonan’ny asa, kanefa efa midangana izay tsy izy sahady ny vidim-bary. Nazavain’ny minisitry ny fambolena moa fa vokatry ny tsi-fisian’ny rotsak’orana, nahatonga ny fihenan’ny voka-bary aloha, no nahatonga io fisondrotana io. Efa naverimberina foana ny hoe mila mandini-tena isika manoloana ity fiovaovan’ny toetr’andro ity. Inoana fa hiverina amin’ny laoniny ny fiavian’ny orana raha samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay.
Eo amin’ny lafiny fanatanjahantena, nandeha ihany ny “Orange Pro League” na dia saika hametraka olana aza ireo klioba sasantsasany. Antenaina fa hizotra araka ny tokony ho izy io fifaninanana io, satria eo no hitarafana ny ho tohin’ny tontolon’ny baolina kitra eto Madagasikara. Io rahateo no anisan’ny fotoana hitsongan’ny mpanazatra nasionaly izay mpilalao hanatevin-daharana ny Barea amin’ny fifaninanana afrikanina.
Mbola vao manomboka ity ny volana janoary kanefa maromaro sahady ireo toe-draharaha somary nafampana teto amin’ny firenena. Tsy dia lafiny politika loatra no tena resahina, fa amin’ny ankapobeny mihitsy. Raha miezaka mitady vahaolana nefa ireo rehetra voakasika, inoana fa hilamina ny toe-draharaha, ka ho lasan’ny 2020 tokoa ny ratsy rehetra. Ny isavorovoroan-kilantoana, ka aoka ssamy hahay handray lesona amin’ny zava-mitranga ankehitriny mba hanatsarana ny hoavy.